KRF: Waxaan ugu yaraan rabnaa sadex wasaaradood - NorSom News
KRF: Waxaan ugu yaraan rabnaa sadex wasaaradood
Shirweynihii xisbiga KRF ee jimcihii lasoo dhaafay ayay ugu danbeyn dood isbuucyo socotay kadib, ku ansixiyeen in xisbigoodu uu ku biiro xukuumada ay hogaamiso Erna Solberg. Waxeyna xubnaha xisbigu ka codeeyaan soo jeedinta gudoomiyaha xisbiga ee aheyd inay la shaqeeyaan xisbiyada Ap iyo Sp ayna meesha ka tuuraan xukuumada Solberg.
Gudoomiyaha xisbiga Krf ee xiligan Knut Hariede ayaa sheegay inuu ka dagi doono kursiga gudoomiyaha xisbiga hadii uu xisbigiisu ku biiro xukuumada Solberg, waxaana howsha ka shaqeynta ku biirista xukuumada Solberg ee xisbiga Krf madax ka noqon doono Kjell Ingolf Ropstad oo hada ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga, balse ay u badantahay inuu la wareego kursiga gudoomiyaha.
Kjell Ingolf Ropstad ayaa sheegay in xisbigiisu uu ugu yaraan rabo sadex wasaaradood oo katirsan xukuumada Solberg, si lamid ah xisbiga Venstre.
Xigasho/kilde: NRK/Halkan kasii akhri
Previous articleDowlada Norway oo soo bandhigtay hindise sharciyeed cusub oo ku saabsan qaabka kala noqoshada dhalashada Norway
Next articleIsha mari: Warar kale oo dheeri ah oo warbaahinta Norway ay ka qortay soomaalida